Wararka - Sida loo nadiifiyo qufulka elegtarooniga ah
1. Ka ilaali muuqaalka nadaafadda: isku day in aanay muuqaalka qufulku ku wasakhayn wasakh iyo wasakh biyo ah, gaar ahaan ha u ogolaan walxaha daxaloobay inay la xidhiidhaan qufulka, iskana ilaali inay waxyeeleeyaan dahaarka dusha sare ee qufulka.
2. Ku nadiifi boodhka iyo wasakhda wakhtiga: ka sokow nadiifinta wasakhda dusha qufulka, boodhka iyo wasakhda daaqadda gacanta ee qufulka faraha ayaa sidoo kale u baahan in la nadiifiyo wakhtiga si looga fogaado inay saameyn ku yeelato dareenka galitaanka faraha.
3. Ha ku laadlaadin gacanta waxyaallaha: gacanta qufulku waa qaybta ugu dheer ee la isticmaalo marka qufulka la isticmaalo wakhtiyada caadiga ah.Haddii ay jiraan walxo culus oo ku dheggan, way fududahay in la dhaawaco dheelitirka gacanta, sidaas awgeed waxay saameynaysaa isticmaalka qufulka albaabka.
4. Xitaa haddii bateriga la beddelo: qufulka elektaroonigga ah wuxuu u baahan yahay batari, batariguna wuxuu leeyahay nolol adeeg gaar ah.Marka batarigu hooseeyo, waxaa laga yaabaa in qufulku aanu si caadi ah u shaqayn.Sidaa darteed, batteriga waa in si joogto ah loo fiiriyaa waqtiyada caadiga ah.Haddii la ogaado in batarigu hooseeyo, waa in lagu beddelaa wakhtiga.
5. Si joogto ah u saliidi silinka qufulka: dhululubada qufulku wali waa udub dhexaadka qufulka elegtarooniga ah, dabacsanaanta dhululubada qufulku waxa laga yaabaa in aanay u fiicnayn sidii hore kadib markii la isticmaalay muddo wakhti ah.Sidaa darteed, qaar ka mid ah saliidda saliidda gaarka ah waa in lagu daraa dhululubada qufulka waqtiyo joogto ah, laakiin dhululubada qufulku waxay ilaalin kartaa heer sare oo dabacsanaan ah.
Kor ku xusan waa sida loo ilaaliyo qufulka elegtarooniga ah.Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto.
Waqtiga boostada: Jun-15-2022